Allgedo.com » 2012 » December » 11
Home » Archive Daily December 11th, 2012
Al-Shabaab oo caawa weerar xooggan ku qaaday magaalada Jowhar
Wararka iminka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee Xarunta gobolka Sh/dhexe ayaa waxay sheegayaan in goor dhaw la maqlay jug xoogan oo loo maleynayo qarax iyadoo rasaas la maqlayo. Dad kusugan magaalada Jowhar gaar ahaan Xaafada Kulmis halka loo yaqaano Bagaashka ayaa iska horimaad ku dhexmaray ciidamada dawlada iyo kuwa Al shabaab oo weeraray halkaasi. Bagaashka halka loo yaqaano waxay ku dhaw dahay...
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa shaaca ka qaaday in wariyayaasha Soomaaliyeed ay waqtiyada qaar galaan Dambiyo, isagoo sheegay in lala xisaabtami doono. Jawaari ayaa hadalkan ka sheegay fadhigii Baarlamaanka ee Maanta, kaasoo ay fadhiyeen wasiirka Gaashaandhiga Fiqi iyo Wasiirada arimaha dibada Soomaaliya Marwo Fowziyo Yuusuf. Waxaa uu qiray in saxafiyiinta...
Faah Faahin: Qarax qasaaro gaystay oo maanta ka dhacay magaalada Jowhar
Wararka Ka’imaanaya Magaalada Jowhar ee Xarunta Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegaya in Qaraxa Jugtiisa aad loo maqlay uu dhowaan ka dhacay magaalada Jowhar. Qaraxa ayaa la sheegay in uu ka dhacay meel aan sidaa uga sii fogeyn buundada magaalada Jowhar, lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay. Ciidamada dowladda ayaa durbaba goobta tagay waxaana lasoo sheegayaa in uu yaalay meydka wiil dhalinyaro...
Hanjabaad ka dhan ah Shabaab-ka Gedo oo kasoo yeeray dowlada Soomaaliya
Saraakiisha ciidamada dowlada Soomaaliya ee ku sugan Gobolka Gedo ayaa hanjabaad kulul u jeediyay Al-habaabka Gedo taasi oo ku aadan in ay gebi ahaanba gobolka ka saari doonaan Alshabaab. Diyaad Cabdi Kaliil oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowlada Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ciidamada huwanta ee ku sugan gobolkaasi ay isku diyaarinayaan in Alshabaab ay ka sifeeyaan Gedo. Diyaad...
Amisom “Al-Shabaabka dagaalamaya waa inay isku soo dhiibaan dowlada”
Afhayeenka ciidamada AMISOM Cali Aadan Xumad ayaa si kulul kaga hadlay baaqna u jeediyay ciidamadii ka tirsanaa Alshabaab ee dhawaan ka baxay magaalada Jowhar ee Shabeelaha Dhexe. Xumad ayaa sheegay in uu baaq u jeedinayo ciidamada Alshabaab ee dhawaan ka baxay magaalada Jowhar iyo degmada Mahadaay ee Shabeelaha Dhexe, waxaana uu sheegay in Alshabaab hadda ay u furan tahay kaliya inay kusoo biiraan...